Fivorian’ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra andiany faharoa : hifantoka amin’ny fanatsarana ny fitantanam-bola sy ny mpiasan’ny kaominina. – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Fivorian’ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra andiany faharoa : hifantoka amin’ny fanatsarana ny fitantanam-bola sy ny mpiasan’ny kaominina.
Fivorian’ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra andiany faharoa : hifantoka amin’ny fanatsarana ny fitantanam-bola sy ny mpiasan’ny kaominina.
Elisé Romuald il y a 1 semaine
Ny renivohitry ny faritra Atsimo Andrefana no handray ny fivorian’ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra andiany faharoa, fantatra amin’ny hoe “journee city’s up Madagascar», manomboka rahampitso faha 24 novambra 2021.
Haharitra telo andro ny fivoriana. Anisan’ny lahadinika hanamarika izany ny fandinihana ny paikady mahomby itantanana ny mpiasan’ny kaominina, ny fomba fanadiovana ny tanàna, indrindra ny paikady momba ny fitantanam-bolan’ny kaominina. Tanjona ny hahatonga ny kaominina hahaleo tena kokoa ka tsy hiankin-doha manontolo aminy fanjakana foibe. Ny vola avy amin’ny hetra no ahafahana mampandroso bebe kokoa ny kaominina.
Ho an’i Toliara manokana, 30℅ ny taham-pahavitrihanan’ny mpandoa hetra ao amin’ny kaominina. Hisy ny paikady vaovao hapetraka mba hiakaran’izany taha izany, hoy ny ben’ny tanànan’i Toliara, Vita Sidison Dede. Hampahafantarina sy hampiharina tsy ho ela izany.
Polio: 3,8 millions d’enfants vaccinés
Fandriampahalemana : nametrahana Brigade Routière Spécialisée ny RN2
Attaque de taxi-brousse à Ilaka Centre : 3 bandits et une complice arrêtés
UNICEF : 500 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aigue d’ici avril 2022
Hisitraka fiahiana ara-tsosialy ny mpilalao sy mpitsara amin’ny diviziona voalohany
ITASY: 64 % des jeunes filles donnent naissance avant l’âge de 25 ans
Fikambanana Fitia: nanolotra fitaovana ho an’ny “Vehivavy mavitrika Maroloha”
Renivohitry ny faritra Amoron’i Mania : anisan’ny tanàn-dehibe hahazo trano mora amin’ny andiany manaraka ny taona 2022.